A ga-ewepụta Wear 2.0 nke gam akporo na February 9, ka Evan Blass na-ekwu Gam akporosis
A ga-ewepụta Wear 2.0 nke gam akporo na February 9, ka Evan Blass na-ekwu
Ọtụtụ ndị bụ ohere nke mbata nke gam akporo Wear 2.0. Ekwuru na ọ ga-abata na mbido afọ 2017, emesịa karịa mmalite ya ga-eme oge ụfọdụ na nkeji nke mbụ nke afọ, nke, ma ọ bụ pekarịa, na-abịa otu ihe mana ihe siri ike. Na nke ikpeazụ anyị maara bụ na ọ ga-abịa ke ntọn̄ọ ntọn̄ọ February. Ugbu a, ngere ahụ na-agbasikwu ike ma ọ dị ka ọ nwere ike nweelarị ụbọchị akọwapụtara maka mbata gọọmentị nke ụdị Android Wear na-esote.
Dịka Evan Blass bipụtara site na profaịlụ ya na ntanetị mmekọrịta Twitter, «Gam akporo Wear 2.0 malitere February 9 ».
Na-egbu oge site na ọdịda ikpeazụ n'ihi 'mkpa chọrọ', Gam akporo Wear 2.0 na-elekwasị anya na ịme ngwaọrụ ndị nwere ike ịgbanye n'okpuru sistemụ arụmọrụ gam akporo ọtụtụ nnwere onwe karịa smartphones.. Iji mee nke a, Android Wear 2.0 na-ejikọ alọ Ahịa Play na ngwaọrụ n'onwe ya nke na-enye ohere nbudata nke ngwa elekere anya na ọbụlagodi nzụta ngwa.
Ikpeazụ December, ụlọ ọrụ nke nnukwu G na-ama ọkwa ụfọdụ ngwa nke ndị ọzọ ga-erite uru nke atụmatụ ọhụrụ nke gam akporo Wear 2.0, agbanyeghị, ha chọrọ ka emechaa usoro ahụ kpamkpam, iji zere ọdịda. N'otu ụzọ ahụ, ọ dị ezigbo mkpa ịnwe ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ndị dị na oge izizi ha.
Ọ bụ ezie na ahịa maka ngwaọrụ ndị nwere ike ịgbanye, ọkachasị smartwatches, nọ na steeti ọnọdụ adaghị adaba, Google agbaala mbọ iwepụta ụdị zuru oke nke gam akporo Wear 2.0. Otu n'ime ihe kpatara nsogbu a bụ ịdabere na elele anya na mgbaaka na ekwentị, yabụ Wear 2.0 nwere ike ịbụ ihe nkwado maka mpaghara ahụ.
Maka ugbu a, anyị ga-eche ihu ma ọ bụrụ na ekwuputara mbido ahụ maka February 9, anyị ga-etinyekwa uche na mgbanwe nke ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A ga-ewepụta Wear 2.0 nke gam akporo na February 9, ka Evan Blass na-ekwu
Pokémon GO ruru $ 800 na ego ha nwetara na oge ndekọ
Ngwaọrụ gam akporo 7.0 Nougat malitere bido na Xperia Z5 na Z5 Premium